चीन हाइड्रोलिक सिलिन्डर निर्माता र आपूर्तिकर्ता - हाइड्रोटेक
घर > उत्पादनहरू > हाइड्रोलिक सिलिन्डर
हाइड्रोलिक सिलिन्डर एक हाइड्रोलिक एक्ट्युएटर हो, जसले हाइड्रोलिक ऊर्जालाई रैखिक पारस्परिक गति (वा स्विङ मोशन) को लागि मेकानिकल ऊर्जामा रूपान्तरण गर्दछ। यो एक सरल संरचना र भरपर्दो काम छ। पारस्परिक गति प्राप्त गर्न यसलाई प्रयोग गर्दा, deceleration उपकरण कम गर्न सकिन्छ, त्यहाँ कुनै प्रसारण अंतर छैन, र गति स्थिर छ, त्यसैले यो व्यापक रूपमा विभिन्न मेकानिकल हाइड्रोलिक प्रणालीहरूमा प्रयोग गरिन्छ।
हाइड्रोलिक सिलिन्डर र हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको ठूलो मात्रामा निर्माताको रूपमा, Hydrotech.ltd विश्वव्यापी ग्राहकहरूलाई समग्र हाइड्रोलिक समाधानहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। हाइड्रोटेकको स्थापना सन् १९९९ मा भएको थियो र यो २० एकड क्षेत्रफलमा फैलिएको शान्डोङ प्रान्तको यिशुई शहरमा अवस्थित छ। यो अब एक राष्ट्रिय उच्च-प्रविधि उद्यम हो र प्रान्तीय-स्तर नयाँ उत्पादन अनुसन्धान र विकास परीक्षण को एक संख्या शुरू गरेको छ, र चार स्वतन्त्र अनुसन्धान र विकास पेटेंट प्राप्त गरेको छ।
हाइड्रोटेकसँग टाई रड हाइड्रोलिक सिलिन्डर, वेल्डिङ हाइड्रोलिक सिलिन्डर, डबल-अभिनय हाइड्रोलिक सिलिन्डर र एकल-अभिनय हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू सहित हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरूको पूर्ण दायरा छ। Hydrotech मा ग्राहकहरु को लागी छनोट गर्न को लागी मानक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरु को एक श्रृंखला छ, र ग्राहकहरु को विशेष आवश्यकताहरु लाई पूरा गर्न को लागी गैर-मानक अनुकूलन क्षमताहरु छ, जस्तै विशेष तेल पोर्टहरु। फारम, विशेष सामग्री, विशेष स्थापना विधि, विशेष प्रदर्शन, superimposed हाइड्रोलिक भल्भ, आदि।
टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर दुई वा बढी पिस्टन हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू मिलेर बनेको हुन्छ। पहिलेको पिस्टन सिलिन्डरको पिस्टन रड पछिल्लो पिस्टन सिलिन्डरको सिलिन्डर ट्यूब हो। टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरलाई बहु-चरण हाइड्रोलिक सिलिन्डर पनि भनिन्छ। हाइड्रोटेकले विश्वभरका ग्राहकहरूलाई उच्च गुणस्तर र राम्रो मूल्यमा ३-चरण टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू उपलब्ध गराउँछ।
औद्योगिक वेल्डिंग हाइड्रोलिक प्रणालीको बढ्दो महत्त्वको साथ अब उद्योगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ, हाइड्रोटेक उत्पादनहरू व्यापक रूपमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ। मानक वेल्डिङ हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको अतिरिक्त, हाइड्रोटेकले ग्राहकहरूलाई कस्टम वेल्डिङ हाइड्रोलिकहरू पनि प्रदान गर्दछ, ग्राहकहरूलाई एकीकृत हाइड्रोलिक प्रणाली समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
हाइड्रोटेक हाइड्रोलिक सिलिन्डर र हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको उत्पादन विकास, उत्पादन र सेवाको लागि प्रतिबद्ध छ। हाइड्रोलिक उत्पादनहरूमा हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू, हाइड्रोलिक भल्भहरू, र हाइड्रोलिक प्रणालीहरू समावेश छन्, जसमध्ये मानक वेल्डिङ हाइड्रोलिकहरू प्रमुख उत्पादन हुन्।
औद्योगिक वेल्डिङ हाइड्रोलिक अब व्यापक रूपमा औद्योगिक इन्जिनियरिङमा प्रयोग गरिन्छ, र हाइड्रोटेक उत्पादनहरू व्यापक रूपमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ। हाइड्रोटेकले मानक वेल्डिङ हाइड्रोलिकहरू प्रदान गर्दछ र ग्राहकहरूलाई एकीकृत हाइड्रोलिक समाधानहरू प्रदान गर्दछ।
उद्योगका लागि वेल्डिङ हाइड्रोलिक्स
हाइड्रोटेक हाइड्रोलिक सिलिन्डर र हाइड्रोलिक प्रणालीहरूको उत्पादन विकास, उत्पादन र सेवाको लागि प्रतिबद्ध छ। हाइड्रोलिक उत्पादनहरूमा हाइड्रोलिक सिलिन्डरहरू, हाइड्रोलिक भल्भहरू, र हाइड्रोलिक प्रणालीहरू समावेश छन्, जसमध्ये उद्योगका लागि वेल्डिङ हाइड्रोलिक प्रमुख उत्पादन हो।
उद्योगका लागि वेल्डिङ हाइड्रोलिक अब औद्योगिक इन्जिनियरिङमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हाइड्रोटेकद्वारा उत्पादित औद्योगिक वेल्डिङ हाइड्रोलिक उपकरण विश्वभरका ग्राहकहरूलाई एकीकृत हाइड्रोलिक समाधानहरू प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छ। उत्पादनहरू व्यापक रूपमा युरोप र उत्तर अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ।
कृषिका लागि वेल्डिङ हाइड्रोलिक्स
यान्त्रिक निर्माणको लागि मुख्य उपकरणको रूपमा, हाइड्रोलिक मेसिनरीले बढ्दो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ। निर्माण मेसिनरी हाइड्रोलिक उपकरण (वेल्डिंग हाइड्रोलिक) को प्रदर्शनले सीधा निर्माणको गुणस्तर र गतिलाई असर गर्छ। कृषिका लागि वेल्डिङ हाइड्रोलिकको निर्यात सम्भावना राम्रो छ, र विश्वभरका ग्राहकहरूलाई स्वागत छ। छानबिन गर्न आउनुहोस्।
हाम्रा सबै हाइड्रोलिक सिलिन्डर परीक्षण गरिएका छन्, किनभने हामीसँग ISO9001 व्यवस्थापन प्रणालीहरूको पूर्ण सेट छ, उत्तम परीक्षण क्षमताको साथ, जुन उत्पादनहरूको उत्पादनको लागि तयार छ, त्यसैले उत्पादन अनुकूलित गर्दा उत्पादनको गुणस्तरको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन। एकातिर, हाइड्रोटेक चीनमा प्रसिद्ध हाइड्रोलिक सिलिन्डर निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरू मध्ये एक हो। अर्कोतर्फ, यो चीनको उच्च प्रविधिको उद्यम पनि हो। त्यसमाथि, हाइड्रोटेकको आफ्नै कारखाना छ र विश्वव्यापी ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरूको कुल समाधान उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छ। यदि म अहिले अर्डर गर्छु भने के तपाईंसँग स्टकमा हाइड्रोलिक सिलिन्डर छ? अवश्य पनि, हामीसँग हाम्रो आफ्नै कारखाना छ भन्ने आधारमा, एकै समयमा, हामीसँग प्राविधिक समर्थन प्रदान गर्न एक पेशेवर प्राविधिक टोली छ। मैले किनेको भए तिम्रो मूल्य कति होला? यदि तपाईंको अर्डर ठूलो छ भने हामी मूल्यमा कुराकानी गर्न सक्छौं। उच्च गुणस्तरका उत्पादनहरू किन्नको लागि हाम्रो कारखानामा स्वागत छ। सहकारिताबाट मात्रै विकास, जित र सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने व्यापक भनाइ छ । हामी तपाई संग धेरै सहयोग को लागी तत्पर छौं।